Indlela Abarhwebi Bangabhala Ngayo Ukulandelelana Kweendaba Zeendaba
Ukufumana iLed Lede iyona nto
Ukubhalwa kwinqaku elilodwa eliphambili lokuphulaphulwa kwinqaku liyinto ecacileyo. Uqala ngokubhala umvuzo wakho, osekelwe kwiibakala ezibalulekileyo ebalini.
Kodwa amabali amaninzi amabali awayiyo nje imicimbi yexesha elilodwa kodwa izihloko eziqhubekayo ezinokuhlala kwiiveki okanye kwinyanga. Omnye umzekelo uya kuba ibali lolwaphulo - mthetho eliqhubekayo ngexesha elide - ulwaphulo-mthetho lwenziwa, ngoko uphando lwamapolisa kwaye ekugqibeleni lubophe ummangali.
Omnye umzekelo unokuba yilingo elide elibandakanya imeko ebalulekileyo okanye enomdla.
Amaphephandaba kufuneka ayenze oko okubizwa ngokuba ngama-follow-up amanqaku ngezihloko ezihlala ixesha elide ezifana nalezi. Kule fayile unokufunda ngokuphuhlisa imibono yamabali okulandelelana. Apha siza kuxubusha indlela yokubhala ukulandelelana.
Isitshixo ekubhaliseni ibali elilandelelanayo lokulandelelana liqala ngolu hlobo . Awukwazi ukubhala inqaku elifanayo imihla ngemihla ibali eliqhubekayo ngexesha elide.
Endaweni yoko, kufuneka uhlawule umtya omtsha ngalunye usuku, enye ebonisa ukuphuhliswa kwamuva kweli bali.
Kodwa ngelixa ubhala i-lede equka ezo ziphuhliso zakutsha, kufuneka kwakhona ukhumbuze abafundi bakho ukuba ibali lokuqala liqala ukuqala ntoni. Ngoko ibali lokulandelelana lidibanisa ngokwenene uphuhliso olutsha kunye nolwazi olumxholo malunga nebali lokuqala.
Masithi ukumboza umlilo womlilo apho abantu abaninzi babulawa khona.
Nantsi indlela owelele ngayo ibali lokuqala unokufunda:
Abantu ababini babulawa ngobusuku obudlulileyo xa umlilo okhawulezayo ushukunyiswa emzini wabo.
Ngoku masithi iintsuku ezimbalwa zidlulile kwaye umshayeli womlilo uxelela ukuba umlilo wawunjalo. Nantsi ikhefu lokuqala lokulandela:
Umlilo wendlu owabulala abantu ababini ngaphambili kule veki yenziwe ngamabomu, umshayeli womlilo wachaza izolo.
Jonga indlela idilesi edibanisa ngayo imvelaphi ebalulekileyo kwimbali yasekuqaleni - abantu ababini babulawa emlilweni - kunye nophuhliso olutsha - umtshini womlilo obhengezelayo ukuba wawushushu.
Ngoku masithathe eli bali ibanga elilodwa. Masithi iveki idlulile kwaye amapolisa abambe umntu othi babeka umlilo. Nantsi indlela uhambo lwakho oluya kuhamba ngayo:
Amapolisa ubanjwe ngendoda esithi babeka umlilo ngesonto eledlule labulala abantu ababini endlwini.
Fumana ingcamango? Kwakhona, i-lede idibanisa ulwazi olubalulekileyo kubali bokuqala kunye nophuhliso lwangoku.
Amaphephandaba athatha amacandelo okulandelelana ngale ndlela ukuze abafundi abangazange bafunde ibali lokuqala bafunde oko kwenzekayo kwaye bangadideki.
Eminye ibali lokulandelelanayo kufuneka lilandele isenzo esifanayo sokuqhagamshelanisa ukudibanisa iindaba zakutsha kunye nolwazi lwangemvelaphi. Ngokuqhelekileyo, uphuhliso olutsha kufuneka lubekwe phezulu kweli bali, ngelixa ulwazi oludala lufanele lusezantsi.
Nantsi indlela amaqonga ambalwa okuqala kwimbali yakho yokulandelelana malunga nokubanjwa kwesigxina somshubeli unokuya:
Amapolisa athi uLarson Jenkins, oneminyaka engama-23 ubudala, wasebenzisa izigubhu ezibethelelwe ngepetroliyo ukubeka umlilo endlwini eyabulala intombi yakhe, uLorena Halbert, 22 kunye nonina, uMary Halbert, 57.
Umculi uJerry Groenig uthe uYecins ubethukuthele ngenxa yokuba uHalbert wayesanda kuphulaphula naye.
Umlilo waqala malunga ne-3 ngoLwesibini wokugqibela kwaye ngokukhawuleza wagijima kwindlu. ULorna noMary Halbert bathiwa bafile kuloo ndawo. Akukho mntu wenzakele.
Kwakhona, uphuhliso olutsha lubekwe phezulu kweli bali. Kodwa bahlala bebophelelwe kwimvelaphi evela kumcimbi wokuqala. Ngale ndlela, nokuba umfundi ukufunda ngoku kweli bali kwinqanaba lokuqala kuya kuqonda ukuba kwenzekani.
I-Q & A Udliwano-ndlebe kunye neFilimu kunye ne-TV Critic Troy Patterson
Ukususela kwiLedes ukuya kwiNtshontsho: Imigqaliselo ye-Journalism
7 Ukukopa ukuHlola imiSebenzi
Inkcazo yomthombo ongaziwayo - Yintoni uMthombo ongaziwayo?
Utitshala ovela kwi-Old School's Worries malunga nekamva leMfundo ye-Journalism
Kutheni Kubhala Kunzima Kakhulu Kunokuthetha?
Samhain Ritual to Honor the Dead Forgotten
Iingoma eziPhambili zeeNkalo ezingama-75 zelizwe
Isingeniso kwiNcwadi kaDuteronomi
IPale Blue Dot
2016 Ukuhlolwa kwe-Chevrolet Camaro
Yiyiphi i-Element kwiNtsapho yeHalide yiLiquid?
I-Princess Jellyfish (Iingqungquthela) Ukuphononongwa
Imfazwe Yehlabathi II: USS California (BB-44)
Indlela yokusebenzisa phpMyAdmin kwiNgcaciso yakho
10 yeeVideos eziMnandi kakhulu ezibukwe kwi-YouTube
Kutheni iChina yaqeshisa i Hong Kong eBrithani?
Isibheno Sokunyanzela / Ukwesaba - I-Argumentum kwi-Baculum
Iingcebiso zokufundisa Abakhubazekile Abantwana Ukuzinakekela Izakhono zoBomi